Uhlalutyo lwe-Quote yeRudyard Kipling "Incwadi yeJungle"
Uhlobo lukaRudard Kipling oluTywayo lweNdaba ezimfutshane
I-Rudyard Kipling " I-Jungle Book " yiqoqo lamabali axhomekeke kubalinganiswa bezilwanyana ze-anthropomorphized kunye ne "man-cub" ebizwa ngokuba yi-Mowgli kwiintlango zaseIndiya, i-adaptation edume kakhulu ye-Disney ye-1967 yefilimu yefilimu enomxholo ofanayo.
Iqoqo lihlukaniswe ngamabali asixhenxe, amaninzi awo afakwe kwiifilimu kunye nemidlalo, ngokugqithiseleyo "yiRikki-Tikki-Tavi" kunye "nabazalwana bakaMowgli," apho ifilimu ye-Disney isekelwe khona.
"I-Jungle Book" ngumlobi wesiNgesi kunye nomlobi u-Kipling umsebenzi odumileyo, ophawulwe ngokusetyenziswa kwakhe ngokucebileyo nesalathisi esichazayo ngokukhumbula ixesha elithile ebomini bakhe achithayo phakathi kwezilwanyana zasendle zaseIndiya. icatshulwa kule ngxowa ngezantsi.
Umthetho weJungle: "Abazalwana bakaMowgli"
I-Kipling iqala "I-Jungle Book" kunye nebali le-cub-cub cub Mowgli ekhuliswa yiengcuka kunye nokwamkelwa ibhere ogama linguBaloo kunye ne-panther egama linguBagheera xa ipakethe ibona ukuba yingozi kakhulu ukuhlala ekhulile.
Nangona ipakethe yempisi yakhula yathanda uMowgli njengomnye wabo, ubopheleleko obunzulu kwi "Law of the Jungle" kubanyanzela ukuba bamnike xa eqala ukukhula ibe ngumntu omdala:
"Umthetho weJungle, ongazange ulandele nantoni na ngaphandle kwesizathu, unqabela zonke izilwanyana ukuba zidle umntu ngaphandle kokuba ebulala ukuze abonise abantwana bakhe indlela yokubulala, kwaye kufuneka azingele ngaphandle kweendawo zokuzingela ipakethi okanye isizwe. Isizathu esona sizathu sokuba ukubulala abantu kuthetha, ngokukhawuleza okanye kamva, ukufika kwamadoda amhlophe kwiindlovu, kunye nezibhamu kunye namakhulu amakhulu amadoda anombala kunye namacwecwe kunye nezibane. banike phakathi kwabo kukuba uMntu nguye obuthakathaka kwaye akanakho ukukhuseleka kwazo zonke izinto eziphilayo, kwaye akukho mntu uthanda ukumbamba. "
Nangona uMthetho utsho ukuba "akukho nto eyingozi emntwini womntu," u-Mowgli uza kudala ekuqaleni kwebali, kwaye kufuneka ahambisane nombono wokuthi uyathandwa ngenxa yento ayenayo, Akunjalo na yena ukuba: "Abanye bayakuzonda, ngokuba amehlo abo akakwazi ukuwuhlangabeza, ngokuba uyilumko, ngokuba uthembele ameva ezinyaweni, ngokuba ungumntu."
Sekunjalo, xa uMowgli ebizelwa ukukhusela ipaki yempisi kwi-tiger uShere Khan, usebenzisa umlilo ukuze anqobe intshaba yakhe ebulalayo kuba, njengokutsho kukaKikling, "zonke izilwanyana zihlala ziloyiko olubulalayo."
Ezinye iindaba ezidibene ne "Book Jungle" Ifilimu
Nangona uhambo lomgaqo we-Mowgli lwenzeka kwi "Mzalwana kaMowgli," ukuguquguquka kweDisney kwasebenzisa iindawo ezininzi "Ubukhulu beBaloo," "Ukuzingela kweKaa" kunye ne "Tiger! Tiger!" ukuchaphazela kuphela ifilimu ye-1967 yangaphambili kodwa inqaku elithi "I-Jungle Book 2," exhomekeka kakhulu kwingxelo yokubuyela kukaMowgli kwidolophana ethi "Tiger! Tiger!"
Kubo bonke abalinganiswa kwifilimu, abalobi bathatha amagama kaPikling ngo-"Kaa's Hunting," "akukho namnye wabantu ba-Jungle abathanda ukuphazamiseka" entliziyweni, kodwa "yayiyi-Maximum Baloo" eyathonya ibhere livuya-lucky isimo kunye nentlonelo kubo bonke abakujikelezile: "Musa ukuxinezela iimbundane zomfokazi, kodwa nibabonge njengoDade noMzalwana, kuba nangona bancinci kwaye banobuncwane, mhlawumbi i-Bear ibona unina."
Ubomi bokugqibela bukaMowgli bubekwe kwi "Tiger! Tiger!" apho azimisela khona "Ewe, ukuba ndiyindoda, kufuneka ndibe ngumntu" njengokuba engena ebomini kwidolophana emva kokumtshathisa uShere Khan okokuqala.
UMowgli usebenzisa izifundo awazifunde ehlathini, njengokuthi "ubomi kunye nokutya kuxhomekeke ekugcineni ingqumbo yakho," ukulungelelanisa nobomi njengomntu, kodwa ekugqibeleni ubuyele ehlathini xa uShere Khan ephinde abuye.
Iziqulatho zikaLascar Carroll: Alice kwiWonderland
Iimfuno ezizithandayo zivela kwi-Old Yeller (1956) nguFred Gipson
Iimfuno zeNtsuku zokuzalwa
Iingcamango zezobugcisa kunye neBrawing Ideas